इलेक्ट्रोप्टिंग परिभाषा र प्रयोग गर्दछ
इलेक्ट्रोप्टिंग वा प्लेटिंग के हो?
इलेक्ट्रोप्टिंग एक प्रक्रिया हो जहाँ धातु को कोटिंग कंडक्टर मा कमी को प्रतिक्रिया को माध्यम ले बिजुली को उपयोग गरेर मा जोड दिए छ। इलेक्ट्रोप्टिंग पनि "plating" को रूप मा जान्छ वा इलेक्ट्रोडेशन को रूप मा।
जब एक कन्डक्टर लेपित गर्न लागी लागू हुन्छ, समाधानमा धातु आयनहरू इलेक्ट्रोडमा पतली तह बनाउनको लागि कम हुन्छन्।
इलेक्ट्रोप्टिंगको संक्षिप्त इतिहास
इटालियन रसायनज्ञ लुगी वैलेन्टिन ब्रुग्नटेल 1805 मा आधुनिक इलेक्ट्रोम्यामीको आविष्कारकको रूपमा श्रेय गरिएको छ।
Brugnatelli को प्रयोग इलेक्ट्रोपेटेशन प्रदर्शन गर्न को लागी एल्टेटिक पाइल को आविष्कार गरे। तथापि, ब्रुग्नेटेलको काम दबाइयो। रूसी र ब्रिटिश वैज्ञानिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा डिपोटेसन विधिहरू प्रयोग गरेका छन् जुन 1899 सम्म तांबे प्लेट प्रिन्ट प्रेस प्लेटहरूमा प्रयोग गर्न थाले। 1840 मा, जर्ज र हेनरी एल्कलिटनले पेट्रोलियमका लागि पेटेंटलाई सम्मान गरे। अङ्ग्रेजी जॉन राइटले पोटेशियम साइयनाइडलाई सुन र चाँदी चुरोट गर्न इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। 1850 सम्म, पीतल, निकल, जस्ता, र टिन को लागी इलेक्ट्रोप्लेटिंग को लागि व्यावसायिक प्रक्रियाहरु विकसित गरियो। उत्पादन सुरु गर्ने पहिलो आधुनिक इलेक्ट्रोप्टिंग संयंत्र 1867 मा ह्याम्बर्गमा नर्डदेत्चे सम्नीनियर थियो।
इलेक्ट्रोप्टिंग को एक अलग धातु को परत संग धातु वस्तु कोट गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ। मित्तो धातुले केही फाइदा प्रदान गर्दछ कि मूल धातुमा कमी छैन, जस्तै जंग प्रतिरोध वा वांछनीय रंग।
इलेक्ट्रोप्टिंग गर्भमा धातुको साथ कोट आधार धातुहरूमा गहना बनाउने उद्देश्यमा उनीहरूलाई अझ आकर्षक र मूल्यवान र कहिलेकाहीँ बढी टिकाऊ बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। क्रोमियम प्लेटिङ मोटरसाइकल रिजम्स, ग्याँस बर्नर, र बाथ फिक्स्चरहरूमा गरिन्छ जुन जंगली प्रतिरोधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भागहरूको जीवन प्रत्याशा बढावा दिन।
स्पेक्टरेटर आयन परिभाषा र उदाहरणहरू
स्टक समाधान परिभाषा
समानता बिन्दु परिभाषा
क्यापिलरी एक्शन परिभाषा र उदाहरणहरू
रसायन विज्ञान मा कार्य परिभाषा
ग्र्याम आणविक जन परिभाषा
बीयरको कानून परिभाषा र समीकरण
गृह डिजाइन आराम गर्नका लागि शीर्ष सुझावहरू
टेडी रोोस्लेल्टको प्रगतिशील (बुल मोस) पार्टी, 1912-19 1 9
राष्ट्रमंडल राष्ट्र को अफ्रीकी सदस्यों की वर्णित सूची
चढाई चढाई चोटी, कीहोल मार्ग विवरण
ADO - DB /7सँग प्रश्नहरू
दस यमस - हिन्दू धर्म मा प्रतिबंध या उचित आचरण
इनलाइन र रोलर स्पोर्ट्स ओलम्पिक स्थिति
जापानीमा ईस्टर मनाउँदै
-ci - फ्रांसीसी प्रत्यय
उपभोग मा एक सकारात्मक बाह्यता
10 उत्तम दक्षिण अफ़्रीकी गोल्फर्स
मिस्र हेर्नुहोस् र उनीहरूको पिरामिड
विभाजन कसरी गर्ने सिक्नुहोस्: स्ट्रेचबाट सुरु गर्नुहोस्
इस्लामिक संक्षिप्त: SWT
ईस्टर भक्तिहरु: मेरो उद्देश्य के हो?
छ बॉल को पूल: मजा र चुनौतीपूर्ण
स्पेनिशको अरब जडान